Waa Cusub oo u Baryay Bandiiradleey…. – Balcad.com Teyteyleey
Degmada Bandiiradleey ee Gobolka Mudug waxaa u baryay Waa cusub ka dib Markii laga hirgaliyay isbitaal casri ah.
Heyadda horumarinta Mudug ( MDO) ayaa ku Guuleysatay inay Degmada bandiiradleey ka hirgaliso isbitaalkaan casriga ah oo Cabirkiisu yahay 100X 100 Kaasoo uu dhulkiisa bixiyay Sheekh Axmed Sheekh Cilmi.
Guddoomiyaha Isbitaalka Indhaha Al-Nuur ahna Guddoomiyaha Hay’adda Horumarinta Mudug (Mudug Development Organization MDO) Dr. C/risaaq Axmed Dalmar oo maalmahan safar shaqo ku marayey gobolka Mudug ayaa lagu maamuusay inuu si rasmi ah xarigga uga jaro isbitaalkaan.
Prof. Dalmar oo munaasabadaas hadal ka jeediyey isagoo ku hadlayey magaca heyaddaha ka qeyb qaatay dhismaha Isbitaalkan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay furitaanka Isbitaalkan laga dhisay Bandiiradley oo uu xusay iney tahay degmo qadiimi ah oo dad fara badan ay ku nool yihiin.
“Waxaan u mahad celinayaa heyaddaha Himilo, Human Conern, qurba joogta ka soo jeeda degaanka iyo intii kale ee ka qeyb qaatay dhismaha isbitaalkan quruxda badan, sidoo kale. Waxaan Kaloo ku faraxsanahay inaan halkan ka caddeeyo in heyadda Mudug Development Organization ay ku deeqday qalabka ugu horeeya ee isbitaalku ku howlgalayo” ayuu yiri Dhaqtarka.
Dr. Dalmar ayaa sharaxaad ka bixiyay qeybaha uu ka kooban yahay isbitaalka iyo waxyaabaha ka dhiman ee loo baahan yahay in loo dhameystiro.
Waxa uu xusay in haatan la diyaariyay illaa afar qeybood oo kala ah qeybaha bukaan socod eegtada oo wadata farmashiga daawada laga bixiyo, gargaarka deg deg ah, Sheybaarka iyo qeybta hooyada iyo dhallaanka. Waxaana uu sidoo kala sheegay inay dhiman yihiin qeybo ay ka mid yihiin Jiifka, nafaqada, cudurada faafa, Masaajid, Ceel iyo waxyaabo kale oo u xusay in loo baahan yahay in lagu soo kordhiyo.
Duqa dagmada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug Xirsi Yuusuf Barre oo munaasabada furitaanka Isbitaalka ka hadlay ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay isbitaalkan, isagoo u mahad celiyay hay’adihii iyo shaqsiyaadkii iska kaashaday hirgalintasa.
“Arritani waxay muujinaysaa haddii bulshadu iskaashato iney wax badan qabsan karto, isbitaalkana waa bilow, howl badan ayuu u baahan yahay, haddii la iskaashado rabbina la talo saarto waxa dhiman lama waayi doono” ayuu yiri Xirsi Yuusuf Barre oo shacabka Bandiiradley kula dardaarmay iney xanaaneeyaan Isbitalkan cusub kana faa’ideystaan.
Waxaa sidoo kale munasabadaas ka hadlay Agaasimaha Isbitaalka Gaalkacyo Maxamed Cabdi, isku duwayaasha wasaaradda Caafimaadka dowlada Somallia iyo maamulka Galmudug oo balan-qaaday iney kaalintooda ka qaadan doonaan howlaha shaqo ee isbitaalka iyo dhameystirka wixii ka dhiman.
Inti ay socotay munaasabadan waxaa si gaar loogu mahad celiyey Shiikh Axmed Shiikh Cilmi oo ka mid ah waxgaradka Bandiiradley kaasoo ku deeqay dhulka uu ku Don’t let some commercial system rob you, when you buy your amitriptyline. We’ve got the lowest prices on the market and we offer amitriptyline only for 0.45 USD! fadhiyo Isbitaalkan oo cabirkiisu gaarayo 100×100, waxaana loogu duceeyey inuu ILAAHAY ka siiy ajir iyo xasanaad fara badan.
Waxgarad, dhalinyaro iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Bandiiradley oo iyana munaasabadan ka hadlay ayaa u mahad celiyey dhamaanba intii ka qeyb qaadatay dhismaha isbitaalkan, iyagoo xusay iney uga maarmi doonaan hooyooyinkii foolanayey ee jidka ku dhiman jiray inta loo sii wado Gaalkacyo oo masaafo badan u jirta, waxayna balan-qaadeen iney ka shaqeyn doonaan sidii loo horumarin lahaa, iyadoo munaasabadan ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan.
Garoon ku yaala Paris oo nin lagu dhextoogtay